tuuray sheet looxa saarayaasha & qeybiyeyaasha - Shiinaha tuuray looxa warqad Factory
Guddiga xumbada xorta ah ee PVC
guddiga pvc celuka xumbo
guddiga midabka PVC
warqad cad oo akril ah
ku shub xaashi akril
xaashida muraayadda akril
xaashiyo akril ah oo midab leh
xaashi akril ah oo barafoobay
dhalaalaya xaashida akril
Waraaqaha caaga ah ee WPC sintra
xirmooyinka xaashida akril
xaashiyo akrilik raqiis ah oo dusha sare leh
xaashida akrilik diffuser
xaashida galaaska akril
1mm xaashida xumbada bilaashka ah ee PVC
xaashi xumbo PVC ah oo midab leh
cufnaanta sare Xaashida xumbo-CO
Acrylic PMMA xaashi caleen cad oo caano ah
1. Darajo: A-grade 2. Cabbirka: 1220x 2440mm, 1220x 1830mm, 2050x 3050mm, baaxadda caadada ayaa la heli karaa. 3. Heerka: A- Fasalka 4. Heerka: 1220x 2440mm, dhumucdiisuna tahay 3mm. Waxyaabaha la habeeyay PMMA, Dhumucda Acrylic 1.8mm-50mm Cufnaanta 1.2kg/cm3 Midabka Hufan, cad, opal, buluug, cas, huruud ect. /Sida baahidaada gudbinta Iftiinka 93% Shahaadada SGS/ROHS/CE MOQ 10 ...
methyl methacrylate tuuray xaashiyo akril
Gudbinta iftiinka wanaagsan.kabka midabka leh. 2.Cimilada wanaagsan. xaashida plexiglass ee midabka leh. 3.Waa la qaabayn karaa oo dib loo soo celin karaa. 4.Wadely isticmaalka, fududahay in rinji iyo rinjiyeynta 5.Non-sumoobin 6.High farsamo xoog. 7. Miisaanka fudud. Xaashida plexiglass ee midabka leh. 8- Saameyn wanaagsan oo xoog leh. xaashida plexiglass ee midabka leh. 9.Goodka Dabeecadda Wanaagsan, oo si weyn loogu isticmaalo qalabka korontada ee kala duwan. 10.Good adag oo adag iyo iska caabin xoqan Resi kiimiko wanaagsan ...
Waraaqda Acrylic ee warqadda Perspex Transparent
2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm ka samaysan xaashi akril
Cimilada iska caabin: Adkaanta dusha adag iyo cimilada wanaagsan ee iska caabinta hantida.
Hufnaan: Hufnaan dhammaystiran iyo gudbinta iftiinka oo leh 93%.
Dahaarka korontada: Dahaarka korontada oo aad u fiican, miisaankiisu aad u fudud yahay
Balaastikada: Balaastigga sarreeya, ka shaqaynta iyo qaabaynta ayaa fudud
Xaashida akril -ka ee PMMA waa badeecad tayo naadir ah, karti u gaar ah iyo waxqabad aad u fiican. Xaashida akril -ka ayaa si toos ah looga soo saaray monomer laba hab: kabka gacanta iyo kabka joogtada ah.
Waraaqda akril UV
CAST Acrylic Sheets -waxa lagu bixiyaa Cad, Madow, Cadaan, Cawl, Naxaas, Buluug, Casaan, Jaalle, Cagaar iyo in ka badan. Codsiyada akril -ka ah waxaa ka mid ah: joodarrada sawirrada, bandhigyada dukaanka, alaabta guriga, shelefyada, daaqadaha, caqabadaha, gaashaammada, galaaska beddelka ah iyo biyo -biyoodka.
Warshadeenu waxay leedahay waayo -aragnimo 10+sano ah xagga wax soo saarka iyo dhoofinta. Ku qanacsanaanta suuqgeena alaabada ayaa ka sareysa 95% SGS, CE, shahaadada ISO. Waxaan diirada saarnaa xaashida galaaska akril oo tayo sare leh. Ku saabsan dhumucda iyo cufnaanta, u fiirsashada xakamaynta tayada iyo adeegga wanaagsan ee macaamiisheena.
Taleefan: +86 -21 -56561003
Dalabka Plexiglass wuxuu kordhaa marka loo eego Covid-19
Falanqaynta Suuqa Xaashida Plexiglass
Plexiglass Extruded Xaashida akril
Ganacsiga ayaa ku soo badanaya shirkadaha caagga ah ...